अनुवाद गर्नुहोस् | Let's Read At Home
सुझाव र स्रोतहरू
अब घरमै बसी बालकथाहरु अनुवाद गर्नुहोस्
दि एशिया फाउण्डेशनले इच्छुक स्वयंसेवकहरूको खोजी गरिरहेको छ, जसले बालकथा तथा बालसाहित्यको पुस्तकहरू अनुवाद गर्न सक्दछन्। यदि तपाईं अंग्रेजी भाषा बाट नेपाली तथा स्थानीय भाषामा अनुवाद गर्न चाहनु हुन्छ भने र तपाईं सँग इन्टरनेट र स्मार्टफोन, ट्याब्लेट वा ल्यापटपमा पहुँच छ भने तपाईं आफ्नो समुदायका बालबालिकाहरूलाई सहयोग गर्न सक्षम हुनुहुन्छ।
Let’s Read डिजिटल लाइब्रेरी को लागी पुस्तक अनुवाद गर्न सजिलो छ। यहाँले केवल तलका चरणहरू अनुसरण गर्नुहोस्:
तपाईको स्मार्ट फोन, ट्याब्लेट, वा कम्प्युटबाट
मा जानुहोस्। लाइब्रेरीको माथि दायाँ कुनामा अवस्थित "अनुवादक साइन इन" चयन गर्नुहोस्।
गुगल खाता प्रयोग गरी साईन ईन गर्नुहोस् (यदि तपाईंसँग गुगल खाता छैन भने, तपाईं नि: शुल्क गुगल खाता सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ)।
यसमा तपाईं एक पटक साईन ईन भएपछि, अब ड्रप डाउन मेनुमा भाषा छनोट गर्नुहोस् र टर्म्स एंड कन्दिशन (Terms and Condition) मा थिच्नुहोस। अब लाइब्रेरीमा विविन्न पुस्तकहरु देख्नुहुने छ। तलको लाइब्रेरीमा भएको कुनै पनि
पुस्तक क्लिक गरेर अथवा खोजेर छनोट गर्नुहोस् ।
तपाईंले अनुवाद गर्न चाहानुभएको पुस्तकको पेजमा तल सम्म स्क्रोल गर्नुहोस्। तपाईंले जुन भाषाबाट र भाषामा अनुवाद गर्न चाहानुभएको त्यो छनोट गर्नुहोस्। केहि पुस्तकहरू पहिले नै अनुवादित भइसकेका हुन सक्छन र केहि अनुवादित भईरहेको हुन सक्छन।पृष्ठको सबैभन्दा तल हेर्नुहोस्, यदि तपाईंले यस्तो पुस्तक पाउनुहुन्छ जुन तपाईंले खोजेको भाषामा अनुवाद गर्ने विकल्प छैन, त्यसको मतलब हामीले त्यस पुस्तकको अनुवाद प्रकाशित गरिसकेका छौं।यदि अरू कसैले त्यो पुस्तकमा अनुवादको काम गर्न सुरु गरिसकेको छ भने, तपाईंले नयाँ अनुवाद सुरू गर्नुको सट्टामा त्यो अनुवादित भईरहेको काममा “सामिल” हुन सक्नुहुनेछ वा अर्को पुस्तकमा जान सक्नुहुन्छ।
पुस्तकको प्रत्येक पृष्ठको अनुवाद गर्नुहोस् र सेव गर्नुहोस्।
जब तपाईंले पुस्तकको प्रत्येक पृष्ठको अनुवाद सेभ गर्नुहुन्छ, पृष्ठको शीर्षमा रहेको बटन प्रयोग गरेर तपाईंको सम्पूर्ण अनुवादहरू बुझाउनुहोस् (सब्मित)। अब तपाईंले अर्को पुस्तक छनौट गर्न सक्नुहुन्छ !
तपाईंको अनुवाद, साथै अन्य स्वयंसेवकहरूको अनुवाद भाषा विज्ञहरूद्वारा समीक्षा गरिनेछ र चाँडै पुस्तकालयमा प्रकाशित गरिनेछ!
यस दुई हप्ताका पुस्तकहरु
यी पुस्तकहरूको सूची हो जुन हामीले यस हप्ता अनुवाद गर्दैछौं। अब तपाईले अनुवाद गर्न चाहानु भएको पुस्तक छान्नुहोस् र पहिलो पृष्ठबाट अनुवाद गर्न सुरू गर्नुहोस्!